Dib u dhigista HomePod ma xaq baa? Apple ayaa ka hadashay | Waxaan ka socdaa mac
Waxyaabaha kale ee maanta u booday fagaaraha teknolojiyadda ayaa ah MAYA imaatinka HomePod, Afhayeenka Apple ee caqliga badan. Markii aan ka hadlayno boodboodka hore, uma jeedno xaqiiqda ah in maanta ay tahay maalintii Apple ay shaacisay dib u dhaca sii deyntiisa taasna ay horey u dhacday toddobaadyo wanaagsan ka hor.
Waxa aan dooneyno inaan dhahno ayaa ah in maanta ay tahay markii Apple hadallada u gaarka ah ee la xiriira dib u dhaca ay soo if baxeen. Dib u dhac ku yimid sida uu sheegayo Phil Schiller laftiisa, ayaa ahaa kii ugu fiicnaa ee ay Apple awood u yeelato inay go aansato waqtigan.
Waxaa jiray dhibaatooyin dhowr ah oo ay ahayd inuu Apple kula dagaallamo bilihii la soo dhaafay labada software iyo qalab ee alaabooyinkiisa cusub, kuwaas oo, HomePod cusub, aysan rabin inay dhacaan. Waqtigaas, gelinta AirPodyada iibka ah, waxaan qabnay qaladaad qashin ka baxa batteriga iyo dhammeystir yar oo ganaax ah oo ku saabsan dhagaha, taas oo si weyn loo dhaleeceeyay. Hadda, Apple waxay dooneysaa inay dhabarka daboosho oo aysan mar kale ku dhicin qaladkii hore waana taas, in kasta oo aan lagu iibin ololaha Kirismaska, Way ogyihiin inay guul noqonayso mana aha in hadda Apple ay tahay shirkad u baahan iib shalay.
Sida laga soo xigtay Phil Schiller:
Waxaan dooneynaa inaan si aad u wanaagsan u qabanno waana inaan waqti qaadno si aan ugu qabanno sida aan rabno. Falsafadeena waa inay ahaato tan ugu fiican. Waxaan u maleynayaa inaan qaadanay go’aanka saxda ah.
Macaamilku maahan sheyga. Macaamiilku waa macaamilka. Ma aragno sawiradaada, mana aqrinayno emaylkaaga. Xayeysiintu ma ahan shaqadeena. Waxaan ku ilaalineynaa adeegsadaha sida ugu adag ee sirta ah intii aan kari karno, xitaa haddii aysan jeclayn.
Sababta ay dib ugu dhigeen iibinta afhayeenkaan ayaan wax isbedel ah ku imaan tanina waxay xaqiijinaysaa sida adag ee ay Apple ugu jirto arimahan. Waxaan ognahay inay tahay wax soo saar ay sanado badan ka shaqeynayeen oo dhowr nooc oo noocyo ah la soo saaray oo la tuuray ilaa ay ka gaarayaan fikirka hada jira. Miyaad u malaynaysaa inay Apple iibin doonto HomePod cusub bil ka yar? Miyaad sugeysaa isaga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Dib u dhigista HomePod ma xaq baa? Apple ayaa ka hadashay